"Ulibale uKumkani uGudú." Incwadi ka-Ana María Matute indiphawulele ubomi. | Uncwadi lwangoku
M. Ukhwekhwe | | I fantasy
UKhohlwa uKumkani uGudú, nguAna María Matute, ithetha lukhulu kum. Kakhulu kangangokuba, ngaphezulu kokuphononongwa, ndingathanda ukukuxelela ibali lendlela endawathanda ngayo amabali. Nangona unolwazi malunga nombhali, ewe, kuba ungoyena mntu uphambili. Ndinyanisile: kude kube yimizuzwana embalwa edlulileyo bendiqinisekile ngento endifuna ukuyibhala, kodwa ngoku ndiphambi kwekhompyuter, kunzima kum ukudibanisa amagama athile. Ndingakuxelela njani nje indlela endivakalelwa ngayo le ncwadiYintoni le indenze ndahleka ndalila kule minyaka idlulileyo? Ndingakuchazela njani ukuba ngumsebenzi ophambi kwexesha lawo kwaye, ngokokubona kwam, udlula iinoveli ezinje INkosi yamakhonkco okanye nayiphi na Ingoma yomkhenkce nomlilo?
Mhlawumbi lawa mathandabuzo aqhelekile kuye wonke umntu ojongene nephepha elingenanto. Kukho into enomlingo, into eyingqayizivele ekubekeni ngamazwi iingcinga ezihamba ngengqondo yakho. Lulo olo uncwadi endinalo: ukudibana nentombazana othandana nayo kakhulu, kwaye ngalo lonke ixesha usiya kumbona uziva usoyika, uchwayitile kwaye unovalo, kuba awufuni kumdanisa. Kodwa ndiza kujikeleza ehlathini, ke ndizakuzama ukuqokelela ezam iingcinga. Ndicinga njengamabali amaninzi, kungcono ukuqala kwakhona.
"Andisokuze ndiyeke, okoko nje ndiphilayo," watsho ngaphakathi, ejonge kuloo mhlaba mkhulu, ungenabemi nowoyikisayo, "de kungabikho ndawo inye efihliweyo emehlweni am inyathelwe lunyawo lwam. Andikwazi kuthwala imvakalelo yokungazi. Ndiya kuwugungqa umhlaba, ndilibone ixhoba lalo. endikuthandayo okanye endikukhonzayo ndiya kukugcina; kwaye oko ndikuthatha njengokungeyomfuneko, okanye okuyingozi, ndiza kukutshabalalisa. Kwaye abantwana bam baya kuqhubeka nomsebenzi wam, kwaye ubukumkani bam abuyi kuba naphakade kanaphakade, kuba umhlaba, kwizizukulwana ngezizukulwana, uya kwazi ngoKumkani Gudú, amandla akhe nozuko, ukuqonda kwakhe kunye nesibindi sakhe, kwaye igama lam liya qhubeka ukusuka kwilizwi ukuya emlonyeni nakwinkumbulo ukuya kwinkumbulo (ixesha elide kunobawo) emva kokufa. " Eli bhongo lamkhuthaza ngokubawa okungaphaya kobutyebi bonke emhlabeni.
Si UKhohlwa uKumkani uGudú ithatha indawo ekhethekileyo entliziyweni yam, phakathi kwazo zonke iincwadi ezidlulileyo ezandleni zam, kungenxa yokuba yayiyinoveli yokuqala kubantu abadala endikufundileyo. Kodwa le ngcaciso ilula kakhulu, kwaye icebisa ukuba uthando endinalo ngomsebenzi lunokuba sisiphumo sodwa kwaye silungiselelwe kuphela umnqweno. Ngokuqinisekileyo oku akunjalo, kuba ndiyifunde kaninzi ebomini bam, kwaye kufundo ngalunye olutsha kubonakala kungcono kum.
Ndikhumbula ndisengumntwana Umama wayedla ngokundibalisela amabali avela kwinoveli. Undixelele ngegqwirha, i-Goblin eseMazantsi, isiXeko kunye neNqaba yase-Olar, iNkundla emnyama, kunye no-Queen Ardid okhaliphileyo. Oonobumba kunye noseto bavuselele ubumnandi bam kangangokuba ndaye ndambongoza ukuba andivumele ndifunde incwadi.
Umama wam, ngobulumko obumfanisayo, ekuqaleni wala; nangona bendihlala ndingumntwana onenkani kakhulu, ke ndiye ndakwazi ukubaleka. Emva kwayo yonke loo nto, kwaye yinto endiyibonileyo kule minyaka idlulileyo, UKhohlwa uKumkani uGudú Libali elimnandi, kodwa likrwada, kuba libonisa iintlungu ezinako ukwenziwa ngabantu. Mhlawumbi ndiyayityala le ncwadi uthando lwam lwamabali amnandi- inokuba lelona gama lilungileyo lokuchaza isimbo sikaMatute- ezo zixubana nokudakumba kunye nethemba.
Imephu yobukumkani bukaOlar, apho iyelenqe le UKhohlwa uKumkani uGudú.
Iingcinga ezivela kwelinye icala
«Masingayideli intelekelelo engako, masingayideli ingcinga engako, xa iirobhothi, iirobhothi, izidalwa zomhlaba ongaphantsi zisothusa zisuka kumaphepha encwadi. Kufuneka sicinge ukuba ngandlel 'ithile abo bantu babebaluleke kakhulu kubomi bamadoda nabasetyhini abanyatheleyo emhlabeni. "
Intetho yokungena kwiRoyal Spanish Academy yoLwimi efundwa nguAna María Matute.
Emva kwexesha elide, ndafunda ukuba uMatute akakhethanga le thoni ngenxa yomsebenzi wakhe wobugcisa. Ibingayi kubaxwa konke konke ukuyithetha loo nto uninzi lwayo luyasinda phakathi kwamaphepha alo. Kwaye lo mfazi wabandezeleka kakhulu ebomini bakhe, de wafikelela kwinqanaba lokudakumba, eso sifo sothusayo sokudakumba abambalwa kakhulu abasiqondayo. A vacío, njengoko wayibiza njalo, eyamsusa umnqweno wakhe wokuphila nokubhala. Ngamazwi akhe, endiye ndaziva ndityiwa ngawo, “bendingenamdla, bendingakhathali. Yonke into yayingabalulekanga kum.
Ngoku sendimdala, nanjengomntu obefanele ukulwa iminyaka nale nja imnyama, ukuphinda ndifunde umsebenzi kaMatute kundenza ndilile. En UKhohlwa uKumkani uGudú kukho zonke iintlungu zakhe, isizungu, ukungaqondi kwakhe umhlaba ongenabulungisa, wabantu abakhohlakeleyo nabazithandayo, kunye nethemba lakhe, umoya ongunaphakade wentombazana engenatyala nebuthathaka eyayiphupha ilahleka kwiHlathi. awayethetha naye rhoqo, kwaye emqonda njengomnyango welinye ilizwe. Le ncwadi ngumnqophiso ka-Ana María Matute, isipili sakhe sika-Alicia esikhokelela kwihlabathi elifanayo. Ukuya kuthi ga ngoku, yile ncwadi bendifuna ukuba ngumbhali wayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » I fantasy » UKhohlwa uKumkani uGudú. Incwadi ka-Ana María Matute indiphawulele ubomi.
Kuqala kufuneka nditsho ukuba ndiyakuthanda ukufunda, kodwa kunzima kum ukugxila, ngakumbi ngabantwana aba-3 abaleqa indlu, kwaye nditsho kuba ingqondo yam ayiniki ngaphezulu, kwaye isimbo sikaMatute asincedi, ikhetheke ngokukodwa ekwenzeni iinkcazo, ukuze ke kufuneka ugxile ekuyiqondeni kakuhle, ubuncinci kwimbono yam.
Oko utshilo, ndiyayithanda, iyakuthengisa ngendlela ekwenza uzive wahlukile kolunye ufundo, kwaye ndicinga ukuba kungenxa yokuba ujolise ngakumbi kwiimvakalelo nakwinkcazo esekwe kwiimvakalelo kuneenkcazo zomzimba.